စစ်တပ်နဲ့ အစိုးရပိုင်သတင်းမီဒီယာတွေက ထိရှလွယ်တဲ့ ပဋိပက္ခဆိုင်ရာသတင်းတွေကို ကျင့်ဝတ်မလိုက်နာဘဲ ရေးသားတာ မသိလို့လား၊ တမင်လုပ်နေတာလား ? | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Dying millionaire doctor’s feeling about his life
တိုင်းပြည်မှာ သာသနာညှိုးနွမ်း ဂိုဏ်းဂနတွေကွဲ ပဋိပက္ခတွေ ဖြစ်နေတာ အရှင်မင်းမြတ်ရဲ့ အစီအမံကြောင့်ပါဘုရား….ခိုင်းစေမှုကြောင့်ပါဘုရား…..” »
စစ်တပ်နဲ့ အစိုးရပိုင်သတင်းမီဒီယာတွေက ထိရှလွယ်တဲ့ ပဋိပက္ခဆိုင်ရာသတင်းတွေကို ကျင့်ဝတ်မလိုက်နာဘဲ ရေးသားတာ မသိလို့လား၊ တမင်လုပ်နေတာလား ?
Myanmar Muslim Media shared from the Source – Kamayut Media
ပဋိပက္ခဆိုင်ရာ သတင်းစာပညာလက်စွဲ မြန်မာမီဒီယာသမားတွေအတွက် ထုတ်ဝေ
October 16, 2014 at 14:59 PM
မြန်မာသတင်းသမားတွေအတွက် ထိလွယ်ရှလွယ် ပဋိပက္ခဆိုင်ရာ သတင်းစာပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ လက်စွဲစာအုပ်ကို အောက်တိုဘာ ၁၅ရက်နေ့မှာ ပထမဆုံး ထုတ်ဝေဖြန့်ချိလိုက်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ ပဋိပက္ခဆိုင်ရာသတင်းတွေရေးသားတဲ့အခါ ဘယ်လိုမီဒီယာတွေက ကျင့်ဝတ်ချိုးဖောက်ကြသလဲ။
ပဋိပက္ခနဲ့ပတ်သက်တဲ့ သတင်းတွေရေးသားရမှာ ဘယ်မီဒီယာမဆို သတိထားရမှာဖြစ်ပြီး လုပ်ချင်တိုင်း လုပ်ခွင့်မရှိတာမို့ စစ်တပ်နဲ့ အစိုးရပိုင်သတင်းမီဒီယာတွေက ထိရှလွယ်တဲ့ ပဋိပက္ခဆိုင်ရာသတင်းတွေကို ကျင့်ဝတ်မလိုက်နာဘဲ ရေးသားတာ မသိလို့လား၊ တမင်လုပ်နေတာလား ကိုဉာဏ်လင်းက မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။
International Media Support နဲ့ မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာတို့ ပူးပေါင်းထုတ်ဝေတဲ့ ထိရှလွယ် ပဋိပက္ခဆိုင်ရာ သတင်းစာပညာလက်စွဲစာအုပ်မှာ ပဋိပက္ခတွေကို ဘယ်လိုချဉ်းကပ်မလဲ၊ ဘယ်လိုအသုံးအနှုန်းတွေကို ရှောင်ကြဉ်ရမလဲ၊ ပြဿနာတွေ သေးငယ်ရာက ကြီးထွားမလာအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ အချက်အလက်တွေ ပါဝင်ပါတယ်။
သက်တမ်းနုနယ်သေးတဲ့ မြန်မာသတင်းလောက တိုးတက်ဖို့ သတင်းသမားတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ ဒီလက်စွဲစာအုပ်က အထောက်အကူပြုမှာဖြစ်ပြီး အစိုးရသတင်းမီဒီယာတွေရဲ့ ရေးသားဖော်ပြမှုတွေမှာ လိုအပ်ချက်တွေ ရှိနေတယ်လို့ IMS ရဲ့ အာရှဒေသဆိုင်ရာအကြံပေးက ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာတွေရဲ့ လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာတွေမှာ အမုန်းတရားဖြစ်စေမယ့် ပြောဆိုရေးသားမှုတွေကို သေသေချာချာ စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေအထားမှာ ရှိနေပြီး အမုန်းတရားရေးသားမှုတွေကို ထိန်းချုပ်ဖို့မလွယ်သလို တစ်ယောက်ချင်းတာဝန်ယူမှုနဲ့ဆိုင်တယ်လို့ သူက ဆိုပါတယ်။
အမုန်းတရားကနေ ပဋိပက္ခတွေဖြစ်နိုင်တဲ့ ပြောဆိုရေးသားမှုတွေကို ထိန်းချုပ်ဖို့ ပြည်ထဲရေးဌာနက ဆိုင်ဘာရာဇဝတ်မှုဥပဒေကြမ်း ရေးဆွဲတာထက် လူငယ်တာဝန်ယူမှုရှိအောင် လုပ်ပေးဖို့က ပိုပြီးအရေးကြီးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Source – Kamayut Media
This entry was posted on October 17, 2014 at 12:11 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.